Taphattoota garee cimaa torban kanaa keessaa Dee Hiyaa, Vertooheen, Silvaa, Aliifi Maaneen keessatti argamu - BBC News Afaan Oromoo
Taphattoota garee cimaa torban kanaa keessaa Dee Hiyaa, Vertooheen, Silvaa, Aliifi Maaneen keessatti argamu
Madda suuraa, .
Garee cimaa Gaarez torban kanaa
Dhum-torbee dabarsine keessa Mohaammed Saalahaan goolii Piriimer Liigii barana lakkoofsisaa jiru 29ffaa lakkoofsisuun Liiverpuulis mo'ateera. akkasumas Leester, Maanchester Yunaayitin, Niiwuukasil, Barnilee, Westi Haam, Maanchester Siitii, Arsenaalaafi Tootinhaam mo'ataniiru.
Garuu gareewwan kana keessaa taphattoota warra kamitu na gammachiisee? Gareenkoo torban kanaa kunooti.
Goolii eeguun- Daaviid dee Giyaa (Manchester Yunaayitidirraa)
Kubbaa si'a lama gooliitti Taamii Abrahaamiin ergame Dee Giyaan hambise akka malee kan cimina isaa mullisanidha.
Kan inni jalqaba gooliin Siiwaansiif akka hin lakkaa'amne dhorke cimina mudhiisaa sirriitti agarsiise. Inni lammaffaas baayyee bareedaa ture. Osoo kubbaan humna guddaan gara gooliitti hin dhiitamiin dura kallattii kubbaan ittiin dhufte sirriitti adda baafatee oolcheera.
Ittisa - Daavinson Saancheez (Tootinhaam), Jaan Vertoongeen (Tootinhaam), Vinsenti Kompaanii (Maanchester Siitii)
Daavinson Saancheez: Raawwii Daavinson Saancheez agarsiisaa ture, keessattuu tapha cimaa akkasiirratti baayyee bareedaadha.
Saancheez tapha Tootinhaam Chelsii mo'aterratti si'a 10 ittisuudhaan taphataa kamiyyuu arka afur caalaa ittisuu danda'eera.
Yaan Vertoongeen: Yaan Vertoongen yeroo Tootinhaam Chelsii waliin taphatanitti ajaa'iba ture jedhaan yada. Erga Tootinhaam dogoggora goolii eegaa isaanii Lyroos isaan naasisee booda, Alvaaroon Moraataa gama Chelsiirraa kubbaa argachuu hin dandeenye; Ediin Hazaardi ammoo suuta suuta bu'aa dhufe.
Vertoongeen tpha Chelsii waliin tureen shan ittisuu danda'eera.
Vinsenti Kompanii: Tapha Eveten waliin ture kanarratti Maanchester Siitiin wancaaf kaadhimamaa waan ta'eef Kompaaniin ga'eesaa siriitti ba'ateera.
Kompaniin tapha Siitiin Everten mo'ate kanarratti kubbaa ciccimoo shan ittisuu danda'eera.
Sarara Gidduu - Jeessee Liingaardi (Maanchester Yunaayitidirraa), Kiristiyaan Eriksan (Tootinhaamirraa), Daavid Silvaa (Maanchester Siitiirraa), Daalee Alii (Tootinhaamirra)
Jeessee Lingaardi: Lingaardi tapha Yunaayitid Siiwaansii taphate keessatti kubbaa kenuudhaan gooliiwwan argama hunda keessatti qooda guddaa fudhateera.
Lingaardi gama hundaan sochii taasisuun yaalii gooliiwwan goolii Yunaaytid taasisan hedduun isaan ture.
Kiristiyaan Eriksan: Eriksan tapha ture kana keessatti sochii baayyee hawwataa taasiseera. Sochii bareedaa taasisaa ture kanaas goolii bareedaatiin dabaalee cimina qaabu agarsiisuu danda'eera.
Tapha Piriimer Liigii kana keessatti bara 2013 irraa kaasee Eriksan gooliiwwan sarara addabbiitiin alarraa rukkutuun taphataa gooliiwwan 16 lakkoofsisuu danda'edha.
Daavid Silvaa: Maanchester Siitiin taphoota 38 darban taphate keessaa al takkaa qofa mo'atame. Tapha boqonnaan booda Siitiin agarsiisan keessatti Daavid Silvaa ijoo ture.
Tapha Piriimer Liigii torban darbee kanaan Ediin Hazaard Silvaa caalaa taphni banaa akka gareesaanii jiraatu taasisuu danda'eera. Kubbaa inni kennes goolii ta'uu danda'eera.
Daalee Alii: Tapha baranaa kana keessa Daalee Alii akka yeroo kaanii ta'uu baatus amantaa leenjisaan isaa irra godhateen ciminasaatti deebiyuun ammam akka ga'u agarsiseera.
Daalee alii bara 2017 irraa kaasee Piriimer Liigii keessatti tapha 100ffaa isaa taphateera.
Sarara Fuulduraa - Saadiyoo Maanee (Liiverpuulirraa), Maarkoo Arnawutovich (Westi Haaamirraa), Leeroyi Saanee (Maanchester Siitiirraa)
Saadiyoo Maanee: Saadiyoo Maanee Kiristaal Paalaasiin saatii tokkoof dhiphise. Maaneen osoo hin jijjiirmiin turuusaatiif carraa argateera.
Gaaliin Maaneen Palaasirratti lakkoofsise taphataa lammii Senegaal seenaa Piriimer Liigii Inglizi keessatti goolee hedduu lakkoofsise isa taasiseera.
Maarkoo Arnawutovich: Arnawutovich taphattota Westi Haam hunda caalaa tapha goolii Piriimer Liigii baranaa kanaan kallattiin keessatti qooda qabaateera. Haaluma kanaan goolii sagal lakkoofsisee sadiimmoo mijeessee kenneera.
Leeroyi Saanee: Saaneen kubbaa lakkoofsisuuf daqiiqaa afur qofaa itti fudhate. Ogummaan inni gama teknikaan qabulleen baayyee cimaadha. Kubbaa kennuu keessattis ni hirmaata.
Goolii jalqabaa Siitii erga lakkoofsisee booda, Saaneen yaalii afur Evertenirratti taasiseeraa.
Achi buuteen lammiilee Siiriyaa kumoota kurna hedduu hin beekamu - UN